Mahabe resaka ny fihetsika ataona andiana miaramila sasantsasany tato ho ato. Taorian’ny fandratrana olona tao Toamasina sy fitifirana tovolahy izay, 25 taona, tsy salama saina izay nitranga tao Andohan’Ilakaka dia tranga maromaro koa no andrenesana fitarainana any Bekopaka Distrika Antsalova. « Nahazo fandrahonana ho faty ny tenako. Miaramila mitam-basy no manao izany. Imaso imaso, ary teo anatrehana Assistant parlemantera no nitenenana izany tamiko ny marainan’ny Alahady 19 jolay 2020 fa : omenay anao ny anjaranao raha mitady ianao », hoy i Francklin Miadrizoky. Voatery nitsoaka ny tenako, hoy ity Ben’ny tanàna teo aloha tao Bekopaka ity. Voatery nisintaka ny tanàna nandeha moto ao Belo Tsiribihina ny tenany, ny alatsinainy teo, naneho ny alahelony tamin’ny horonantsary, ho « fanairana ny mpitondra fanjakana sy ireo ambaratongam-pifehezana miaramila » manoloana ny « fihoaram-pefy sy ny herisetra » ataon’ny miaramila sasany nalefa hampandry tany ao Bekopaka araka ny nambarany.
mercredi, 22 juillet 2020 10:37
Fahamaizan’ny ONE: Tsy mbola misy hetsika hitadiavana tohana ara-bola
Nanao fampahafantarana ny Minisiteran'ny Tontolo Iainana sy ny Fandrosoana Lovainjafy (MEDD) fa ny hetsika rehetra hitadiavana tohana ara-bola noho ny fahamaizana nitranga tamin'ny trano nisy ny Foibem-pirenena momba ny Tontolo Iainana (ONE), ny alin'ny 15 jolay lasa teo, dia tsy maintsy filazana ôfisialy avy amin'ny Minisitera (MEDD) sy ny ONE irery ihany. Izay rehetra mitonona ho manana fahefana hanao izany dia sokajiana ho mpisoloky ary henjehina araka ny lalàna.
lundi, 20 juillet 2020 20:50
Andohan’Ilakaka: Nitifitra tsy salama saina ny miaramila, mitsabo ny maratra ny fanjakana
Nafanafana ny toe-draharaha teto Andohan’Ilakaka androany, tapaka nandritra ny fotoana vitsy hatramin’ny fifamoivoizana tamin’ny lalam-pirenena faha-7. Andian’olona maro no nidina an-dalambe naneho ny fanoheran’izy ireo ny nitifiran’ny miaramila tovolahy iray "tsy salama saina, tsy nanao aro-tava". Naratra mafy ity farany. Nanao fanambarana ary nampita izany tamin'ny tambazotran-tserasera ny Ministeran’ny Fiarovam-pirenena nanasokajy ho « fihoaram-pefy » ny fikasihan-tanana ataon’ny miaramila sasantsasany, tahaka ny tany Toamasina sy Ilakaka, ary milaza fa « efa mandray fepetra hentitra hanasaziana azy ireo ».
Nisintona poketrana vehivavy iray mpiantsena teo akaikin'ny tetezan-dRamala Isotry – Antananarivo ireto mpanendaka miisa telo ireto no tra-tehaky ny Polisy manao fanamiana sivily. 16, 18, 19 ny taonan’izy ireo, ary efa fanaon'izy ireo ity asa ratsy ity. Tsy nampoizin'ireto zatovo ny fisiana Polisy manao fanamiana sivily mivezivezy amin'iny faritra iny ka tra-tehaka. Noentina tao amin'ny Kaomisaria Isotry ireo mpanendaka ary tonga nametraka fitoriana azy ireo ilay vehivavy voaendaka.
samedi, 18 juillet 2020 13:35
Nosy Be: 10 000 Ar no namonoany ny mpampiasa azy
Voasambotry ny Zandary ny 13 jolay teo i Dix, rehefa nokarohina nandritra ny roa volana. Namono nahafaty vehivavy iray, izay mpampiasa azy tany Ambatozavavy - Nosy Be izy, tranga izay niseho ny 12 May 2020. Vola 10 000 Ariary, karamany izay mbola tsy voaloa no namonoany tamin’ny fomba feno habibiana ilay vehivavy mpampiasa azy.
« Mbola aty amin’ny hopitaly aho, resetsika ny Covid », hoy Rasoloelison Lanto tamin’ny pejiny facebook. Minisitry ny angovo sy ny akoran’afo, ary efa minisitry ny fitantanam-bola sy tetibola tamin’ny fitondrana Hery Rajaonarimampianina izy. (Jereo Sary Tohiny)
Nitafa tamin’ny mpanao gazety teo Antaninarenina, nanoloana ny sisan’ny afo taorian’ny fahamaizan’ny foiben’ny Office Nationale pour l’Environnement na ONE, ny minisitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy, Raharinirina Baomiavotse Vahinala ny tolakandro teo namintina ny zava-nitranga sy ny asa ataon’ny ministera iadidiany taorian’iny loza iny. Raha nanodidina ny tamin’ny 8ora sy sasany ny alin’ny alarobia 15 jolay no tsikaritry ny manodidina ny fisiana setroka sy lelafo tany amin’ny rihana ambony ny birao, dia tamin’ny 9ora latsaka dimy, ny minisitra no nahazo fampandrenesana avy amin’ny Tale jeneralin’ny ONE sy ny minisitry ny filaminam-bahoaka fa mirehitra ny ONE. Niakatra teny an-toerana avy hatrany izy taorian’izay. Niezaka nanavotra izay azo navotana ny mpiara-miasa hoy ny minisitra, ary anisany tafavoaka tsy may tao ny « serveur » mirakitra ny dosie vita nomerika.
mercredi, 15 juillet 2020 21:59
Ambohibary-Moramanga: Hazoala miisa 285 notaterina an-tsokosoko
Kamiao iray no tra-tehaky ny ekipan’ny CIREDD Moramanga nitondra hazoala tsy ara-dalana miisa 285 ny alin’ny 12 jolay lasa teo tao Amboniarenana ao amin’ny Kaominina Ambohibary-Distrikan’i Moramanga. Hazoala ao amin’ny faritr’ala manodidina ny orinasa Ambatovy, Kaominina Andasibe no alain’izy ireo. Mitohy ny fanadihadiana mba hanatrarana ireo rehetra voakasik’ity raharaha ity.
mercredi, 15 juillet 2020 13:37
Orinasa miaramila Moramanga: Manao ny andrana amin'ny famokarana herinaratra
Manao ny andrana amin'ny famokarana herinaratra izay namboarin'izy ireo ny eny anivon'ny Orinasa miaramila (UMM) Moramanga. Ny trano fonenan'ireo mpiasa eny an-toerana moa no nanaovana ny andrana. Tanjona ny hanamora ny asa sy ny fifandraisana amin'izao andro mafy amin'ny ady amin'ny Covid-19 izao, ahafahana miaro ny vahoaka sy ny fananany.
mercredi, 15 juillet 2020 08:42
Paul Rabary: « Nataon’ny Covid-19 marenina tanteraka ny sofiko ilany »
« Roapolo andro katroka androany aho no niady tamin’ny Covid-19 », hoy i Paul Rabary tao amin’ny pejiny facebook. « Ady mafy, ady tena sarotra, ady mangotraka saika namoizako ny aiko. Efa imbetsaka no sempotra sy tsy avy niaina intsony. Efa nisy fotoana nametra-beloma ny tapaka sy namana rehetra. Ary efa vonona ny hilavo lefona ny vatana sy ny saina fa nitaky ny fialantsasatra amin’izay », hoy hatrany ity minisitry ny fanabeazam-pirenena teo aloha ity. « Nataon’ny Covid-19 marenina tanteraka ny sofiko ilany. Koa aza omena tsiny aho raha toa ka tsy maheno tsara intsony rehefa miresaka mivantana aminareo. Ary mbola tsy tena salama tanteraka aho manoratra ho anareo fa mbola mila manao “rééducation” ny avokavoko izay nitondra takaitra koa ».